भिडियो Archives - Page3of6- Nepali Virals
६५ बर्षीय बृद्धले १२ बर्षीय बालिका बिहे गर्न लाग्दा के भयो ? (हेर्नुहोस भाइरल भिडियो)
१६ फाल्गुन २०७२, आईतवार ११:०१	741
पौराणिक कालमा ७० बर्षीय शिब शर्मा ब्रह्माणले ७ बर्षीय गोमालाई बिहे गरेको कथा धेरैलाई थाहा होला (स्वस्थानी कथामा) । तर अहिलेको युगमा पनि यस्तो घटनाको कमि हु सकेको छैन । बिश्वभर अहिले बालबिबाहलाई कानुनले बन्देज लगाएको छ । नेपालमा अहिले बालबिबाह बिरुद्ध कडा कानुन समेत बनेको छ । युनिसेफको एक रिपोर्ट अनुसार विश्वमा चार जनामा एक जना महिलाले १८ बर्ष अघि नै बिबाह गर्ने गरेको छ । तर अहिलेको एकाइसौ युगमा त्यसमाथि अमेरिका जस्तो बिकसित देशमा ६५ बर्षीय बृद्धले १२ बर्षीय बालिका बिहे गर्न खोजेपछि के होला ? । यदी तपाईले बालबिबाह गर्न लागेको देख्नु भयो/थाहा पाउनु भयो भने के गर्नु हुन्छ ? रमीता हेरेर फोटो भिडियो खिच्नु हुन्छ ? चुप लागेर आफ्नो बाटो हिड्नु हुन्छ ? अथवा किन बालबिबाह गर्दैछ भन्ने बारेमा बुझेर 'एक्सन' लिनु हुन्छ ? तर अमेरिकामा एक बृद्धले बालिकासँग सडकमै बिहे गर्न लागेपछि हंगामा भएको छ । हेर्नुहोस यो भाइरल भिडियो जुन अपलोड भएको ५ दिनमै ३० लाख भन्दा बढीले हेरेका छन् ।
सन्नी लियोनसँग सुहागरात बिताउन समय नपुगेपछि
१३ फाल्गुन २०७२, बिहीबार १७:५४	3,450
सन्नी लियोन, भारतीय मुलकी पोर्नस्टार यतिखेर जो बलिउडमा सबैभन्दा धेरै चर्चामा छिन्। सन्नीलाई आदर्श मान्ने र उनको भिडियो हेरेर रात बिताउनेको कमी छैन तर जिवन भनेको ३० मिनेटको पोर्न भिडियो मात्र होइन। त्यो सन्नी लियोनकै जिवनले देखाइसकेको छ। चुरोटको सर्को र तरुणीको सप्को युवा उमेरको सबैभन्दा ठूलो प्राप्ति जस्तो लाग्छ, त्यस्तो लाग्ने युवा जमात ठूलो छ। तर जिवन सर्को र सप्कोको रमाइलो मात्र होइन भनेर स्वयंले बुझेकी सन्नी लियोनले युवाहरुलाई चुरोटको सर्कोबाट बचाउनका लागि नयाँ पहदकदमी लिएकी छिन्।
हरेक नेपालीले हेर्नै पर्ने भिडियो भारतले गरयो निषेध
१२ फाल्गुन २०७२, बुधबार १५:३८	1,834
पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौं कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौं... राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको यो गीत नसुन्ने नेपाली को होला र ? तर यो गीतको भाव र इतिहास कमैले मात्र बुझेका होलान । त्यसताका नेपालको सिमाना कहाँ सम्म थियो अनि अहिले कसरी यति सानो क्षेत्रफलमा खुम्चियौ ? इष्ट इन्डिया कम्पनीले जितेका सबै भूभाग फिर्ता दिने भन्दा पनि नेपालका शाषकहरुले किन फिर्ता लिन मानेनन ? हो, ग्रेटर नेपालको अबधारणा अनुरुप हामीले आज यही सामग्री भिडियोसहित प्रस्तुत गर्दै छौ जुन हेरेर तपाईको मन भत्भती पोल्ने छ र नेपालका लागि मर्न/मार्न तयार हुनु हुनेछ । हेर्नुहोस् भिडियो ....
ब्युटी युवतीले बाटोमै कन्डम मागेपछि…(हेर्नुहोस भिडियो)
६ फाल्गुन २०७२, बिहीबार ०९:१८	7,646
सडकमा हिडिरहँदा एउटी स्मार्ट ब्युटी युवतीले कण्डम माग्यो भने तपाई के गर्नु हुन्छ ? अझ कण्डम किनी देउ भनेर जबर्जस्ती गरि भने तपाई के गर्नु हुन्छ ? लाजले भुतुक्कै भएर कुरा गर्नु हुन्छ ? संगै गएर किन्नु हुन्छ ? अथवा युवतीलाई लिएर कतै रिल्याक्स गर्ने प्लान बनाउनु हुन्छ ? अथवा उनको प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गरेर भाग्नु हुन्छ ? यो त तपाईको कुरा भयो तर यहाँ एउटी युवतीले बीच बाटोमै कण्डम माग्दै हिडेपछि युवायुवतीहरु अचम्मित परे । हेर्नुहोस् भिडियो....
पिठ्युमा बाख्राको पाठो राखेर अनौठो योगा ! (हेर्नुहोस भिडियो)
३ फाल्गुन २०७२, सोमबार १४:०४	493
स्वास्थ्यका लागि योगाको महत्व अथाह छ । योगा मार्फत सामान्यदेखि जटिल रोगसम्मको निदान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय पूर्वीय समाजलाई पछ्याउदै पश्चिमा क्षेत्रमा पनि योगाको क्रेज बढ्दो छ । हामीले यहाँ यस्तो एउटा योगा प्रस्तुत गरेका छौ जुन देखेर तपाई 'तिनछक' पर्नु हुनेछ ।
३ फाल्गुन २०७२, सोमबार ०८:३३	922
पानीको बोतलबाट सजिलै बन्छ १५ थरि समान (दंग पार्ने भिडियो)
२६ माघ २०७२, मंगलवार १७:१२	496
तपाई हामीले पानी खान प्रयोग गर्ने प्लाष्टिकको बोतल पानी सकेपछि के गर्छौ ? कतिपयले फेरि पानी खान सुरक्षित राख्छन भने धेरैले पानी सकेपछि फोहोरका रुपमा फालिदिन्छन । तर यो भिडियो हेरी सकेपछि तपाई अचम्ममा पर्नु हुन्छ । तपाईले त्यसरी फाल्ने बोतलबाट बिभिन्न १५ थरि समान तपाई आफैले बनाउन सक्नु हुन्छ त्यो पनि सामान्य तरिकाले । पत्याउनु भएन ? एउटा सामान्य बोतलबाट १५ थरि समान भनेपछि पत्याउन गार्है पर्ला । तर यो भिडियो हेर्नुहोस जसमा रोचक तरिका अपनाएर पानीको बोतलबाट १५ ओटा समान बनाएर देखाईएका छन् । यसो गर्दा एकातिर उक्त समान किन्ने पैसा जोगिन्छ अर्को तिर बाताबरण प्रदुषण न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्छ ।
भिडियोमा हेर्नुस, यसरी बस्दैछन् मंगल ग्रहमा मानिस
३ माघ २०७२, आईतवार १७:०४	2,956
मंगल, ज्योतिषिय दृष्टिले शुभ मानिने यो ग्रहले तपाइँ हामीलाई मंगल गरे पनि नगरेपनि वैज्ञानिकहरुले चाहिँ यो ग्रहलाई मंगलगर्ने भएका छन्। त्यो पनि मानिसको वस्ती बसाएर। अमेरिकी नेतृत्वमा चलिरहेको अन्तरिक्ष अभियानले अब पृथ्वी भन्दा बाहिर मानववस्ती विस्तारको सपना देख्न थालेको छ। पछिल्लो समयका मंगल अभियानले यो ग्रहमा मानिस बाँच्न सक्ने देखाएपछि यतिखेर अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको ध्यान मंगलमा मानिसको बस्ती बसाउने छ। त्यसका लागि जुटिरहेको अन्तरिक्ष अभियानले आगामी १० देखी १५ वर्षा मंगल ग्रहमा मानिसको वस्ती बसाउने पक्का छ। यतिखेर मंगल ग्रहमा मानिसको वस्ती बस्ने कुरालाई ठोकुवा गरेर भन्न सकिने अवस्था भएपनि १० वर्षा अन्तरिक्ष अभियानले कस्तो गति लिन्छ भन्ने अनुमान गर्न भने मुस्किल छ। मंगल ग्रहमा मानिसको वस्ती बसाउने भन्दै नासाले अन्तरिक्ष यान देखी पृथ्वी देखी मंगलग्रह सम्मको यात्रा, खानपान र उर्जाको व्यवस्थापनका लागि तयारी गरिरहेको छ। त्यसै क्रममा नासाले एनिमेटेड भिडियो तयार पारेर वैज्ञानिकहरुले कसरी मंगल ग्रहमा जाने र मानिसको बसोबासका लागि आवश्यक सामग्रीहरुको उपलब्धताको व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएका छन् त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छ। मंगलग्रहमा मानिसको आवागमनका लागि अनौठो खालको सवारी साधनको डिजाइन गरिएको छ। आधुनिक प्रविधिले सुसज्जित यस्ता सवारीहरुले मंगलमा पनि पृथ्वीकै जस्तो भान गराउने छन्। अहिलेको परिस्थिती र अनुमान अनुसार मंगल ग्रहमा जान र फर्कनका लागि मानिसलाई तीन वर्षको समय लाग्छ। यसलाई घटाउने गरि द्रूत गतिको अन्तरिक्ष यान निर्माणको लागि अध्ययन पनि जारी नै रहेको छ भने नासा र विश्वभरका अन्तरिक्ष वैज्ञानिकहरुले सन् २०३० सम्ममा मंगलग्रहमा मानिसलाई बसाउन सकिने आशा राखेका छन्।
ब्लिच हालेपछि कोकाकोला भयो सेतो
१८ पुष २०७२, शनिबार १३:५९	1,097
कोकाकोला, यसका बारेमा कसैले केही भन्नै पर्दैन। हुन त कोकाकोलाका लागि कुनै मौसम पनि कुर्नु पर्दैन तर पनि नेपालमा गर्मीको मौसम कोकको मौसम हो। त्यसैले त गर्मीको समयमा रेडियो देखी टेलिभिजनमा सुनिन्छ चिसो भनेकै कोकाकोला...'
नयाँ वर्षमा यसरी लगाउनुस् पालिस
१५ पुष २०७२, बुधबार १९:०८	527
पार्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ या तपाइँ नङ पालिसको शौखिन हुनुहुन्छ भने नयाँ वर्षमा यो शैली अपनाउनुस्